ထွန်းဖောင်ဒေးရှင်း စာပေတစ်သက်တာ စာပေဆုရှင်အဖြစ် ဆရာလယ်တွင်းသားစောချစ်နှင့် ဆရာဘိုးလှိုင်?? - Yangon Media Group
ထွန်းဖောင်ဒေးရှင်း စာပေတစ်သက်တာ စာပေဆုရှင်အဖြစ် ဆရာလယ်တွင်းသားစောချစ်နှင့် ဆရာဘိုးလှိုင်??
ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၇-(၁၂)ကြိမ်မြောက် ထွန်းဖောင်ဒေးရှင်း ၂ဝ၁၇ စာပေဆု ချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် ထွန်းဖောင် ဒေးရှင်းတစ်သက်တာ စာပေဆုရှင် များအဖြစ် ဆရာကြီးစည်သူ ဦးတင် လှိုင်(လယ်တွင်းသားစောချစ်)နှင့် ဆရာကြီးဒေါက်တာတင်လှိုင် (ဘိုး လှိုင်)တို့ရရှိခဲ့ပြီး စာပေပညာရှင် ၁၈ ဦးကိုလည်း စာပေဆုအမျိုးအစားခွဲ ၍ဆုများချီးမြှင့်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားကို မတ် ၁၇ ရက်တွင် ရန်ကင်းမြို့နယ်ဘဏ် များအသင်းအဆောက်အအုံ၌ကျင်း ပခဲ့ပြီး အခမ်းအနားသို့ ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေမြင့်တက်ရောက်ကာ စာပေဆုများကို ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
အခမ်းအနားတွင် ဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေမြင့်က”ထွန်းဖောင်ဒေး ရှင်းစာပေဆုကျင်းပလာတာဟာ အ ခုဆိုရင် ၁၂ ကြိမ်မြောက်ရှိပြီလို့သိ ရပါတယ်။ သက်တမ်းကြာရှည်တဲ့ဆု ဖြစ်ပါတယ်။ သက်တမ်းရင့်တဲ့စာပေ ဆုဖြစ်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ သက် တမ်းရင့်လာခြင်းသည်လည်း ပိုပြီး တန်ဖိုးရှိခြင်းကို ပြသခြင်းဖြစ်ပါ တယ်။ စာပေဆုချီးမြှင့်ရာမှာ ဘယ် လောက်ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ သမာသ မတ်ကျကျရွေးချယ်နိုင်လည်း ဆိုတာ လဲတန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဆုကြေးငွေ ချီးမြှင့်ရာမှာ ဘယ်လောက်ချီးမြှင့် တယ်ဆိုတာလည်း စာပေဆုတန်ဖိုး ကိုဆုံးဖြတ်ပေးရာမှာပါပါတယ်။ စာ ပေဆုတွေကို ချီးမြှင့်ပေးခြင်းအားဖြင့် စာပေကိုလည်း ချီးမြှင့်ရာရောက် လည်းပါတယ်။ ဆုရရှိသူကိုလည်းချီး မြှင့်ရာရောက်ပါတယ်။ ဆုပေးရာမှာ ထောင့်ပေါင်းစုံစဉ်းစားပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ရည်ညွှန်းစာပေဆုပါ တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အမျိုးသားစာပေဆုမှာလည်း ရည် ညွှန်းစာပေဆုပေးဖို့ စဉ်းစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု အမှာစကားပြော ကြားခဲ့သည်။
ဝန်ကြီးကသိမ်ဖြူစာအုပ်တန်း ကိုစာအုပ်ဆိုင်ခက်ခဲသူများနှင့် စာ ဖတ်သူများတစ်စုတစ်စည်းတည်း ဆုံ နိုင်ရန်ဖွင့်လှစ်ထားကြောင်း၊ မြန်မာ လူမျိုးများလည်း စာပေကို နှစ်ခြိုက် စွာဖတ်ကြောင်း နိုင်ငံတကာကို ပြသ ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် စာအုပ်တန်းကို ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများလာရောက် လည်ပတ်သည့် နေရာဖြစ်အောင် လုပ် ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။
တစ်သက်တာ စာပေဆုရှင် ဆရာကြီးစည်သူ ဦးတင်လှိုင် (လယ် တွင်းသားစောချစ်)ကလည်း”လူငယ် တွေကို ပြောချင်တာက စာများများ ဖတ်ပါ။ စာရေးတဲ့အခါ စာမျိုးစုံကို ကိုယ်ကြိုက်သလို စာမျိုးစုံရေးသား ကြပါ”ဟု ပြောသည်။
” လူငယ်တွေကို ပြောချင်တာ ကအောင်မြင်မှု နောက်မလိုက်ဘဲ ဘဝမှာနေ့စဉ်တိုးတက်မှုရှိအောင် လုပ်ပါ။ အဲဒီလိုလုပ်ဆောင်ခြင်းအား ဖြင့် အောင်မြင်မှုက ကိုယ့်ဆီကို အ လိုလိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်”ဟု လူ ငယ်စာပေဆုရရှိသော ဦးကျော်ကျော် လှိုင်ကလည်း ပြောသည်။
ထွန်းဖောင်ဒေးရှင်း၏ နာယက ကြီး ဒေါက်တာသိန်းထွန်းက”နိုင်ငံ တော်အနေနဲ့အမျိုးသားစာပေဆု၊ စာပေဗိမာန်ဆု၊ အမျိုးသားစာပေ၊ တစ်သက်တာ ဆုချီးမြှင့်ပွဲကျင်းပခဲ့ သလို ထွန်းဖောင်ဒေးရှင်းအနေနဲ့ မြန်မာစာပေလောက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ပါဝင်အထောက်အကူပြုတဲ့အနေနဲ့ အခုလိုဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်” ဟု အခမ်းအနားတွင် နှုတ်ခွန်းဆက် စကားပြောကြားသည်။
ထွန်းဖောင်ဒေးရှင်းမှ စာပေဆု ရရှိသူများမှာ တစ်သက်တာစာပေဆု ရှင်များအဖြစ် ဆရာကြီးစည်သူ ဦး တင်လှိုင်(လယ်တွင်းသားစောချစ်)၊ ဆရာကြီးဒေါက်တာတင်လှိုင်(ဘိုး လှိုင်)နှင့် စီးပွားရေးဘာသာရပ်အ တွက်စာပေဆုကိုသတိုးလွင် (ပထဝီ ဝင်)၊ ကျန်းမာရေးဘာသာရပ်အတွက် ဒေါက်တာလှကြည် (အာဟာရဆရာ ဝန်ကြီး)၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဘာသာရပ်အတွက် သိပံ္ပစာရေးဆ ရာကိုကိုအောင်၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိစာပေ ဆုအနေဖြင့် ပါမောက္ခခင်မောင်ဝင်း (အသည်း)၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိ(အင်္ဂလိပ်)ဆု အတွက် Aung Than Batu နှင့် Aung Gyi(ပူးတွဲ)၊ ရှေးဟောင်းကျမ်း ဘာသာရပ်အတွက် ထွန်းရီ (ရှေး ဟောင်းသုတေသီ)၊ လူငယ်ဘာသာ ရပ်အတွက် ကျော်ကျော်လှိုင်၊ သမိုင်း ဘာသာရပ်အတွက် ဘိုးလှိုင်၊ သမိုင်း (အင်္ဂလိပ်)ဘာသာရပ်အတွက် Dr. Saw Mra Aung၊ ယဉ်ကျေးမှု ဘာ သာရပ်အတွက် သိန်းသန်းဝင်း (မလှိုင်)၊ စာပဒေသာအတွက် သင့် နော်၊ စာပဒေသာအတွက် မနှင်းဖွေး၊ ရည်ညွှန်းကျမ်းအတွက် ဦးသန်း ထိုက်တို့မှရရှိခဲ့ပြီး ဦးသိန်းဆွေ၊ ချိုး ငှက်(သံတွဲ)၊ ဒေါက်တာစိန်မြင့်၊ နန္ဒာ မိုးကြယ်၊ နန္ဒာမင်းလွင်၊ ဒေါက်တာ ခိုင်ခိုင်ဝင်းတို့က ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ စာမူများဖြင့် စာပေဆုအသီးသီး ရရှိ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
လယ်ဝေးတွင် ဆီဘောက်ဆာ တိမ်းမှောက်မီးလောင်၊ အိမ်သုံးလုံးကိုပါ ကူးစက်လောင်ကျွမ်း
မော်တင်စွန်း ကမ်းခြေ ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အများပိုင်ကုမ္ပဏီ ထူထောင်သွားမည်
နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲများ အနေနှင့် သေချာမှန်ကန်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ သိရှိရန်လိုအပ်ဟု ဦ